Soosaaraha ugu fiican nootropic & warshad
Wisepowder waxay leedahay noocyo kala duwan oo ceyriin ah oo ah budada Nootropics, waxayna leedahay guud ahaan nidaam maarayn tayo leh.
Muujinaya 41-60 ee natiijooyinka 62
Budada Noopept (157115-85-0)
Budada Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) budada (1224690-84-9)
Budada Tianeptine (66981-73-5)
Budada Nootropics ama daroogooyinka xariifka ah ayaa ah iskudhaf caan ah ama kaabis ah oo xoojiya waxqabadka garashada. Waxay ku shaqeeyaan iyagoo kordhiya shaqada maskaxda sida xusuusta, hal-abuurka, dhiirrigelinta, iyo feejignaanta. Daraasadihii ugu dambeeyay waxaa diiradda lagu saaray sameynta nootropics cusub oo suurtagal ah oo laga soosaaray alaabada synthetic iyo dabiiciga ah. Saamaynta nootropics ee maskaxda ayaa si ballaaran loo darsay. Nootropics-ka wuxuu saameyn ku yeeshaa waxqabadka maskaxda iyadoo loo marayo dhowr habab ama dariiqooyin, tusaale ahaan, marinka dopaminergic. Daraasadihii hore waxay soo sheegeen saameynta nootropics ee daaweynta xanuunada xusuusta, sida Alzheimers, Parkinson, iyo Huntington cudurada. Dhibaatooyinkaas waxaa loo arkaa inay wax u dhimayaan isla waddooyinka nootropics. Sidaa darteed, nootropics-ka dhowaan la aasaasay waxaa loogu talagalay si xasaasi ah oo wax ku ool u ah waddooyinka. Nootropics-ka dabiiciga ah sida Ginkgo biloba ayaa si ballaaran loo darsay si loo taageero faa'iidooyinka nootropics-ka.
Kala Soocidda Naasaha
Waxaa jira laba nootropics: kala duwanaansho, isku shaandheyn, sheybaar la abuuray sida budada Piracetam, iyo astaamaha dabiiciga ah iyo dhirta, sida Ginkgo biloba iyo Panax quinquefolius (American Ginseng). Nootropics-ka waxaa lagu cadeeyay kor u qaadida shaqada maskaxda iyadoo isla waqtigaana maskaxda laga dhigo mid caafimaad qabta.
Farsamooyinka Waxqabadka Nootropics
Budada Nootropics-ka ee ugu fiican waxay yareysaa heerarka malondialdehyde ee maskaxda, waxay kordhisaa heerarka moleekuudiyeyaasha antioxidant sida; glutathione iyo superoxide dismutase. v
Is dhexgalka lala yeesho dopamine-D2, serotonergic iyo GABAB qaatayaasha. v
Yaraynta heerka MAO-A iyo plasma corticosterone heerarka. v
Waxay yareyneysaa isu imaatinka noradrenaline waxayna yareyneysaa isu imaatinka monoamines-ka dhexe. v
Xakamaynta waxqabadka acetylcholinesterase ee maskaxda. v
Waxay kordhisaa waxa ku jira lipids-ka iyo fosfoofids-ka maskaxda. v
Waxay ka ilaalisaa neerfaha sunta ay ku badan tahay sunta 'glutamate'. v
Isbeddellada waxqabadka soo dhoweynta NMDA. v
Dhaqdhaqaaqa-xagjirnimada-cabsi-gelinta; Waxay yareysaa waxyeelada H2O2 cytotoxicity-ka iyo dhaawaca DNA.
Kordhi Barashada iyo Xusuusta:
Barashadu waa geeddi-socodka lagu helo aqoon cusub ama wax laga beddelo aqoonta hadda jirta, halka xusuusta la siinayo ay tahay awoodda maskaxdu ku xeroon karto, kaydinayso, ama soo celin karto macluumaadka markii loo baahdo. Barashada iyo xusuusta labaduba waxay muhiim u yihiin ka helitaanka khibradaha, qorsheynta ficillada mustaqbalka, iyo joogtaynta tayada nolosha oo sarreysa.
Hagaajinta Diirada iyo Feejignaanta:
Feejignaanta iyo feejignaanta ayaa ah kartida qof maskaxdiisa ku soo koobo hal shaqo adoo iska indhatiraya dhiiri gelinta deegaanka. Waxaa jira dhowr dhinac oo kala jaad ah oo feejignaan ah, waxayna hoos yimaaddaan howlo kale oo garasho badan.
Hagaaji Tamarta Maskaxdaada:
Maskaxda waxay isticmaashaa ku dhawaad ​​20 boqolkiiba tamarta jirka, iyo tamarta maskaxda waxay la xiriirtaa caafimaadka maskaxda guud ahaan. Iyada oo aan lahayn tamar ku filan, dhammaan maaraynta maskaxda ee maskaxda ayaa la gaabin doonaa.
· Waxay u horseedi kartaa Xaalad Ka Fiican
Niyaddu waxay ka kooban tahay gobollo badan oo maskaxeed oo kala duwan, oo ay ka mid yihiin welwel iyo niyad-jab. Niyad jab ayaa la muujiyay inuu saameyn ku yeesho tamarta maskaxda, caabbinta walaaca, iyo wareegga maskaxda.
Kordhi Adkaysiga Cadaadiskaaga
Welwelka ayaa si cad u saamaynaya waxqabadka maskaxda iyo wanaagga guud. In kasta oo maaraynta walwalka ay ahaato qaybta ugu muhiimsan barnaamij kasta oo lagu horumarinayo shaqada garashada, qaar ka mid ah budada nootropics ayaa sidoo kale caawin kara.
In kasta oo dad badani u isticmaalaan maandooriyahaas kobcinta maskaxda degdegga ah, faa'iidooyinka muddada-dheer ee neerfaha ee nootropics-ka waa in aan la iloobin. Cilmi-baarisyada qaar waxay soo jeedinayaan in dhinacyada hoos u dhaca da'da la xiriira garashada ay ka bilaaban karaan caafimaadka, dadka waaweyn ee wax bartay xitaa inta ay ku jiraan da'da 20 iyo 30na. Si kale haddii loo dhigo, marna ma ahan xilli hore in la bilaabo daryeelidda maskaxdaada –waxaa loo yaqaan 'nootropics Powders' door ayey ka ciyaari karaan.
Sidee loo Isticmaalaa Nootropics?
Haddii aad bilaabi doonto inaad tijaabiso supplements-ka nootropic Powder, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso dhowr maalgashi oo yaryar si aad u bilowdo. Nootropics-ka ugu fiican ee ugu tayada wanaagsan ayaa lagu iibiyaa qaabkooda saafiga ah budada nootropics bulk bulk. Caadi ahaan, waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay sida ay tahay inaad u cabbirto iyo budada nootropic sida loo qaato.
Maaddaama xeryahooda badankood ay dabiiciyan yihiin, waxaad ku dari kartaa cuntada noocaas ah ee dhirta ku saleysan cuntadaada. Ka sokow, waxaad u isticmaali kartaa cuntada vegan iyo kaabitaan dabiici ah si aad u heshid faa'iidooyinka buuxa ee suurtagalka ah. Ama, waxaad ugu dari kartaa qaab budo ah meelaha loo yaqaan 'smoothies', shaaha, ama cabitaanka.
Dadka qaarkiis waxay xasaasiyad u leeyihiin dhowr maado; Sababtaas awgeed, waxaad u baahan tahay inaad dhagayso jirkaaga iyo takhtarkaaga oo aad u isticmaasho kaabisyada nootropic-ka sida ku habboon.
Dheeri dheeraad ahi kama bixi karto waxyeellada waxyeelada leh ee xulashooyinka hab-nololeedka ee liita ee aan taageerin caafimaadka maskaxdaada. Sidaa daraadeed, waxaad ubaahantahay inaad sameyso isbedelo togan noloshaada nolosha si aad uhesho faa iidada ugu badan ee daroogadan caqliga leh.
Nootropics-yada ma yihiin kuwo nabdoon?
Go'aaminta badbaadada nootropic way ka dhib badan tahay sidii ay u muuqan lahayd. Si ka duwan daawooyinka dawooyinka, kaabayaasha nootropic maaha inay maraan tijaabooyin caafimaad oo muujinaya nabadgelyadooda ka hor intaan la iibin. Dhamaan geeddi-socodka soo-saarka nootropics-ka ayaa saameyn ku yeelan kara nabadgelyada nootropic. Laga soo bilaabo isha budada nootropics ilaa daawooyinka nootropics isticmaalka ugu dambeeya.
Budada Nootropics waa cunsurrada ugu muhiimsan ee kaabista nootropics, soo-saaraha budada nootropics waa isha budada tooska ah ee nootropics. Warshadda budada nootropics ee wanaagsan waa inay lahaato qalab wax soo saar oo loogu talagalay nabadgelyada iyada ah mudnaanta ugu sarreysa.
Waxyaabaha kale ee saameeya Nootropics nabdoon waxaa ka mid ah:
(1) Badbaadada ay cilmi baaristu taageerto
Habka ugu wanaagsan ee lagu xaqiijiyo badqabka nootropic waa tijaabooyinka bukaan socodka.
(2) Foomamka nootropic ee horumarsan
Marka maaddooyinka nootropic (budada nootropics-ka sare) lagu soo bandhigo qaabab tayo sare leh, ammaankooda ayaa laga yaabaa inuu horumar sameeyo
(3) Samaynta taxaddar leh
(4) Gaarsiinta nadiifka ah
Muxuu fiican yahay nootropics-ka haddii kaabsooshadu sido ay kuu xun yihiin? Kaabista nootropic, waxaan mararka qaarkood ku aragnaa soosaarayaasha isticmaalaya kaabsal, waxyaabaha lagu daro iyo xulashooyinka la isweydiin karo ee la xariira khataraha caafimaad ee imaan kara.
(5) U qaado nootropics si sax ah
Haddii aad rabto inaad iibsato nootropics, fikirka ugu horreeya ee laga yaabaa inuu yahay "Nootropics ma nabad baa?" . Way adagtahay in jawaab toos ah ama maya la bixiyo. Sababtoo ah waxaa jira doorsoomayaal aad u tiro badan oo saameyn ku yeelan kara nabdoonaanta nootropic, laga soo bilaabo maaddada ilaa maaddada iyo waxa ku soo dhaca iyo sumadda. Ka hor intaadan iibsan budada nootropics, waxaa fiican inaad sameyso raadinta badan, laga bilaabo ilaha budada nootropics ilaa gaarsiinta.